पति निरन्तर अपमान र अपमानित गर्दछ - एक मनोवैज्ञानिक को सल्लाह
हरेक महिलाले पतिलाई तिनलाई जोगाउन र उनको ज्यान जोगाउन चाहन्छ। केवल यस वातावरणमा उनी आवश्यक महसुस गर्छन् र प्रिय। परिवारमा गहिरो सम्बन्धले महिलाको पखेटालाई आफ्ना छोराछोरीलाई सहयोग पुर्याउँदछ, पतिलाई समर्थन गर्दछ, घरको निरीक्षण गर्दछ र धेरै काम गर्दछ।
यद्यपि, कहिलेकाहीँ त्यहाँ परिस्थितिहरू छन् जहाँ पति लगातार निरन्तरता र अपमान गर्छन्। महिलाको लागि भावनात्मक रूपमा सन्तुलित र सक्रिय रहन असम्भव छ कि यस्तो वातावरणमा। उनले केही समयसम्म बर्दाश्त गर्न सक्थे र आशा गर्छिन् कि उनको पति कारण हुनेछ। तर तब सबै नै एक क्षण आउनेछ जब तंत्रिकाहरु माथि हुनेछ, र महिला विकसित स्थिति देखि एक उत्पादन को खोज गर्न शुरू हुनेछ।
तथ्यले गर्दा पतिले आफ्नी श्रीमतीलाई अपमान र अपमान गर्छन्, त्यहाँ विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन्:
पतिले आफ्नी पत्नीको लागि न्यानो भावनाहरू महसुस गर्दैनन्। सबैलाई थाहा छैन कि प्रेम समर्थित हुनुपर्दछ। यसैले, हरेक परिवारमा कूलिंग भावनाको क्षण आउँछ। यस अवधिको समयमा, दुर्गम भावनाहरू र सम्बन्धलाई बलियो बनाउनको लागि काम गर्नु आवश्यक छ। यदि पतिहरूले यो बुझ्दैनन्, परिवारमा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ।
मेरो पतिले मालकिन थियो। यदि पतिले आफ्नी श्रीमानलाई अपमानित र अपमानित गर्छ भने, उसले उसलाई यस्तो व्यवहारबाट हटाउन बलियो बनाउन सक्छ, ताकि उनको पत्नीमा तलाक गर्ने निर्णयको जिम्मेवारी।
पतिले आफ्नी पत्नीको आदर गुमाएका छन्। यसका लागि धेरै कारणहरू पनि हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, एक महिलालाई निर्णय गर्न गए, आफैंको हेरचाह गर्न रोकिनु भयो, अनियमितता, दुलही, बोरिंग भयो। त्यस अवस्थामा, उनी कष्टप्रद गर्न सुरु गर्न सक्छन्, तर तिनी आफैं बुझ्न सकेनन्।
पतिसँग कम आत्म-सम्मान छ, त्यसैले यसको कारणले उनको पत्नीको अपमानजनक कारणले उठाउँछ।
एक पत्नीले आफैंलाई अपमानजनक व्यवहारलाई अनुमति दिँदै, पहिले नै विचलित सम्बन्धलाई बढाउन चाहँदैनन्।
पत्नीले आफ्नो पतिले दृढतापूर्वक नियन्त्रण गरेको छ, यसले उनको कस्तो नकारात्मक असर पार्छ।
पतिलाई कसरी अपमान गर्ने?
कहिलेकाहीँ स्त्रीहरूले पतिलाई अपमानित गर्ने भन्ने बारे सोधे। त्यहाँ एउटा असम्भव जवाफ छ: कसैले पतिको अपमान नदेखाउन हुँदैन। कठोरता बन्द नगर्नुहोस् कि त्यो थकित वा भोकाएको छ। यो तुरुन्तै शान्त टोनमा बोल्नु पर्छ: "कृपया यस टोनमा मलाई बोल्दैन, अन्यथा हामीलाई बोल्न बन्द गर्नुपर्नेछ।"
सतावटको लागि जुनसुकै कारण, तपाईलाई आफ्नो पतिको साथ कुरा गर्न र यसको बारेमा आफ्नो भावनाको बारेमा कुरा गर्नु पर्दछ। यदि एक समस्या छ भने, तपाईं परिवर्तन गर्न तयार हुनुहुन्छ भनेर व्याख्या गर्नुहोस्, तर यसको भागमा तपाइँ बढी तपस्या हुन आवश्यक छ। यदि पतिले कुनै कुरा सुन्न चाहँदैनन् र स्थितिमा काम गर्न तयार छैन, त्यसमा थप कट्टरपन्थी उपायहरू लिन आवश्यक छ: केही समयको लागि वा तलाक पनि।
पुरुषहरू किन महिलाका बटहरू हेर्न चाहन्छन्?
कसरी मानिसलाई हुक्छ?
उनको पतिलाई कसरी पाठ सिकाउने?
तिमीलाई केटा कस्तो छ?
सेक्स मा संगतता
प्रियको समर्थनको शब्द
विवाहित मान्छे र नि: शुल्क स्त्री - मनोविज्ञान
मानिस कहाँबाट परिचित हुन सम्भव छ?
अलपत्रमा प्रिय प्रेम
अनुहारमा रङको सपना किन?
रम एप्पलटन कारखाना
वजन गुमाउन सडकमा सर्दमा दौडिँदै
गर्भावस्थाको समयमा पेटमा तीव्र दुखाइ
कपोर - कसरी यो र कस्तो स्टाइलिश टोपी लगाउने?
हड्डीहरूको लागि भिटामिन
मिस्ड मासु संग पास्ता पुलाव
कपालको लागि रंगीन चक्कु
लुडमिलाको एन्जिलको दिन
पोद पागल मा नुस्खा - नुस्खा
झिल्लीको साथ कसरी जैकेट धोएर?
मोटो ऊनहरूसँग कालो स्यान्डल
कसरी ब्रोकोली पकाउने?
विवादास्पद चर्च विवाह
कुन हातमा तिनीहरूले सगाईको औंला लगाउँछन्?
एक्वामियम बिरुवाहरु को लागि उर्वरक
Ganaton - analogues
FGDS - यो चिकित्सामा के छ, कसरी प्रक्रियाको लागि तयारी गर्ने?
लाभांश ग्रंथको बीउ
कफीमा कति कैलोरीहरू छन्?